Afrikana Maro (Fa Tsy Ny Rehetra) Mahatsiaro An’i Fidel Castro Ho Tena Naman’ny Tanibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2016 8:18 GMT
Fidel Castro miaraka amin'ny filoha Ogandey Yoweri Museveni. Sary nozarain'i Yoweri Museveni tao amin'ny Twitter.
Iray amin'ireo mpitantana maneran-tany tian'i Afrika tena tiana indrindra Fidel Castro, ilay Kiobàna mpitarika revôlisiônera izay maty ny zoma 25 Novambra tamin'ny faha-90 taonany.
Noho ny fitondran'i Kiobà ny anjara birikiny nandritra ny ady nanoherana ny fanjanahantany sy ny fanavakavahana tany amin'ireo firenena Afrikana, toa an'i Afrika Atsimo, Namibia, Angolà, Mozambika ary Guine Bisao, no tena anton'izany. Ho fanampin'izany, nanofana dokotera Afrikana maro i Kiobà ary nandefa ireo dokoterany tany amin'ireo firenena Afrikana. Ny ohatra vao haingana indrindra tamin'ny fanampian'ireo dokotera Kiobàna an'i Afrika izao ny nandritra ny kirizin'ny Ebola, raha nandefa dokotera teo amin'ny 300 isa teo ilay firenena.
Teo noho eo taorian'ny fanambaràna ofisialy ny fahafatesany, nankao amin'ny Twitter mba hanome voninahitra an'ilay olo-malaza kaominista ireo mpitondra Afrikana sy olon-tsotra maro.
Nanoratra izao ny filohan'i Nizeria, Muhammadu Buhari:
Namana be an'i Afrika, an'ireo firenena any Atsimo rehetra ary ny Hetsika Tsy Miandany amin'ny Atsy na ny Aroa, i Fidel Castro. Azo antoka ny toerany ao anatin'ny tantara
Nanamarika izao ny filoha Keniana, Uhuru Kenyatta:
Nampiseho tamin'ny tany tontolo ihany koa i Castro fa hevitra tena lehibe indrindra tsy maintsy ampanjakaina amin'ny fotoana rehetra ny fanaovana ho ambony indrindra ny fitoviana manam-piandrianana.
Nibitsika izao i Issa Shivji, Tanzaniana profesora mpampianatra lalàna, raha niresaka ny fampanantenan'i Castro hoe “hanafaka ahy ny tantara“:
hanafaka be dia be azy tokoa ny tantara. Firenena kely nijoro nifanandrina tamin'ny hery miaramila ratsy toetra indrindra teto an-tany.
Nanamarika ny zava-niseho i Prince Maphosa hoe maty ny Zoma Mainty izy, fotoana izay manamarika ny fiantombohan'ny fotoanan'ny fiantsenana amin'ny vanimpotoana Krisimasy.
Tsy nanjary ny 2016
tsy misy maneso toy izany, maty ny andro Zomà Mainty i Fidel Castro, ny andro faran'izay tena kapitalista indrindra. #MHSRIP
I Luka koa gaga hoe hay mbola velona ihany izy:
“Imwe” hay mbola velona foana i Fidel Castro hatrizay? eh.
Nizara fitarainana malaza i Siame:
Haha samy lasa manampahaizana manokana momba an'i Castro daholo izany ankehitriny… ary ho maro ny isan'ireo tapatapakà fitanisàna ho alefa tsy maintsy hiaretantsika
Nanamarika izao i Ory Okolloh Mwangi, mpiara-manorina ny Ushahidi, tao aminà bitsika izay hita ho milaza ny fahagagana tamin'ny fahalanian'i Donald Trump ho filoha manaraka ho an'i Etazonia:
Niandry mihitsy i Castro nandra-pahamazava tsara hoe nigorodana avy any ivelany ilay Fanjakana lehibe.
Manazava ny zavatra nampianarin'i Castro azy i Mohamed Harith any Kenya:
Nohazavain'i Fidel Castro tamiko tsara ny fanoherana ny fanjakazakana. Nampianatra ahy izy hoe, manana ny sarany ny fitsanganana fa tsy voavidim-bola kosa ny fahamendrehana. Mandria am-piadanana ry Mpamonjy
Nanome ireto hevitra manaraka ireto ho an'ireo Afrikana i Betty Waitherero, Kenyana mpikaroka :
Raha mijery amin'ny google hoe iza i Fidel Castro, jereo hoe ahoana ny nanohanan'ny Kiobà ny tolon'i Afrika nanoherana ny fanjanahantany.
Zava-dehibe izany. Zava-dehibe ny nahatongavana ETO.
Toy izao ny fahatsiarovany an'i Castro, avy amin'i Dr. Majak D'Agoot, lefitry ny ministry ny fiarovana teo aloha tao Sodana Atsimo :
Hita maso amiko ireo dian-tànanao, ary amin'ny ankamaroan'ireo Mpitari-tafika ambony ao amin'ny SPLA izay nofaninao. Manao veloma mandrakizay anao aho, ry Commandante-ko!
Adam Habib, Chanchelier lefitra sy Lehiben'ny Anjerimanontolon'ny Witwatersrand any Afrika Atsimo:
Fahataperan'ny vanim-potoana iray – maty i Castro. Nandritry ny 50 taona no nitolomany nanoherana ny fanjakazakana, tafavoaka velona tamin'ireo fikasàna maro hamononaa azy ho faty izy, ary maty am-piadanana teo am-pandriany.
Paul Kagame, filohan'i Roandà, nanoratra izao:
Mandria am-piadanana Fidel Castro, mpiady tsy nihemotra mihitsy, izay niaina fiainana afaka tanteraka & fampiononana ho an'ireo vahoakan'i Kiobà nilaozany
Nahamarika izao ny mpampiasa Twitter ao Afrika Atsimo:
Tsy ho hadinonay mihitsy ny fomba nanohanan'i #FidelCastro ny ady nanoherana ny fanavakavahana raha tsy nanao izany kosa ny tany ‘mandroso’. Castro, niaraka tamin'ireo hadisoany, dia tena mpitondra.
Nandefa izao hafatra manaraka izao an'i Castro ilay Ganeana mpihira rap , Ko-Jo Cue:
Mandria am-piadanana Fidel Castro… Teneno i Che hoe tianay izy… Teneno i Kadhafi hoe miala tsiny izahay… Teneno i Nkrumah mba hamela ny helokay… Teneno i Sankara hoe marina ny anao🙏🏿
Niaiky ireo fahadisoan'i Castro, nilaza izao i Nii Sarpei Hornsby, Ganeana mpanolotra kaoferansa:
Nanana ny hadisoana maro izy, fa aza avela ireny no hilaza aminareo hoe mpanao jadona sy mpandatsa-drà i Fidel Castro.
Aza avela langainy ianareo.
Nanoratra izao i Miss Hamalwa:
#RIPCastro ampitao amin'i #CheGuevara ny fiarahabàna avy amina, teneno izy fa misy filoha mainty any Etazonia, ary ankehitriny, mpiara-miasa amin'ireo mpanjanaka ireo Afrikana mpitondra .😢😢
Kanefa, tsy ireo Afrikana rehetra nampiasa ny Twitter no nampiseho fanindrahindràna an'i Castro. Ohatra, nanoratra izao i Yasmin Yonis:
Noesorin'ireo andiany Etiopiana notohanan'i Castro tao an-tranony ny raibeko ary novonoina teo anatrehan'ny fianakaviako. Miangavy asio fahasamihafàny kely.
Avy any Somalia i Yonis, firenena izay nandefasan'i Kiobà andiany mba hiady eo ankilan'ny tafika Etiopiana nandritra ny Ady Etiopiana-Somalinaa tao amin'ny faritra Etiopiana nifandirana ao Ogaden tamin'ny volana Jolay 1977 hatramin'ny Martsa 1978.
Nitondròn'i Oluwasenyi Karimu fampitahàna teo amin'i Castro sy Robert Mugabe, ilay filoha Zimbaboeana 92 taona :
#FidelCastro,#Mugabe & #OyedepoCanaanLand , manana zavatra itoviany…nandimby azy ireo ny fianakaviany rehefa maty ry zareo, izay no zava-misy!!!
Raha toa i Peter Kamalingin niantso ny fahafatesan'i Castro ho ny “fahataperan'ny hadisoana”:
Ny fahataperan'ny hadisoana – #Fidel Castro, tsy vitany ny hizaka an'i Trump ary nanapa-kevitra izy hoe ampy izay